DHEGEYSO-Falanqayn ku saabsan u jeedada dowladda Imaaraadka ee Doorashada Somalia. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Falanqayn ku saabsan u jeedada dowladda Imaaraadka ee Doorashada Somalia.
Noofember 1, 2016 4:24 b 0
Abu-Dhabi, Novb 01 2016–Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in halkaasi lagu soo gabagabeeyey shirkii albaabadu u laabnaayeen ee hogaamiyayaasha Soomaalida.
Shirkaani ayaa waxaa ka qaybgelayay madax kasocota dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada kajira dalka Soomaaliya, oo Imaaraadku casuumey.
Imaaraadka carabta ayaa Waxaa lasheegayaa in sanadkan uu Galaagal siyaasadeed uu kuleeyahay Doorashada soomaaliya isagoo loolan adag kula jira Dowlada Turkiga oo Mudo badan soomaaliya siinaysay taakulooyin kaladuwan.
Hadaba Cabdulaahi xuseen xasan Cabdullaahi Wadaag Waa Qoraa Waxbadan kalasocda Arimaha Carabta kanaqaatay shahaadada (M A) Mastar Digrii.) Jaamacada inter National Uuniversety )oo kutaal islaama Bad.
Waxaa uu falan qaynayaa faragalinta imaaraadka carabta ee dalka soomaaliya iyo waxa xiligan kusoo beegay iyo Danaha uu lkaleeyahay soomaaliya.
Sawirro-Puntland oo martigelisey shir looga hadlayey maalgashiga.
DHEGEYSO-Wasiirka waxbarashada oo ka warbixiyey safar uu kutegey Nugaal Karkaar iyo Bari.